Ngwa: A Guest Post Market Market | Martech Zone
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke arịrịọ m ga-esi Martech Zone bụ ndị ọbịa post arịrịọ. Anyị na-emeghe nke ọma na arịrịọ ndị a ma ọ bụrụhaala na ha anaghị ere ahịa ma ọ bụ na-anwa ị nweta backlinks. Ekwenyesiri m ike na ọdịnaya anyị na-enye dị mma iji chebe ebum n'uche m nke inyere ndị ahịa aka nyocha, ịchọpụta, na ịmụ banyere teknụzụ ahịa.
Usoro maka ọkwa ọbịa nwere ike ịbụ ihe mgbu, n'agbanyeghị. Mgbe m nwere a usoro nrubeisi, Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ mmadụ anaghị azacha ajụjụ ndị dị mkpa (ma ọ bụ na-agha ụgha banyere ebumnuche ha nke backlinking… grrr.)
Dị ka nsogbu ọ bụla ọzọ dị, enwere azịza maka nke ahụ! Ịnweta bụ ahịa ahịa ọdịnaya ebe azụmahịa nwere ike bipụta akwụkwọ ọbịa ha na weebụsaịtị ụfọdụ dị elu. N'ezie, ahịa ha ugbu a nwere ebe nrụọrụ weebụ 15,000 edepụtara (na nsonye Martech Zone) ebe ị nwere ike ịzụta ma bipụta akwụkwọ ozi ndị ọbịa.
Ndị na-ebipụta akwụkwọ nwere ike ihichapụ ha ikike ikike Moz, ikike peeji, iwu ndị mbipụta, asụsụ, yana ma ị nwere ike itinye backlink n'ime ọdịnaya ahụ ma ọ bụ na ị gaghị.
Dị ka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ ole na ole dị n'elu, ọnụahịa nke ibipụta isiokwu nwere ike ịbụ ezigbo ego… mana n'ihi nha saịtị ndị ahụ, ndị na-ege gị ntị na ikike ha nwere na ụlọ ọrụ ahụ, ọ nwere ike ịbụ nnukwu ego maka azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
M umeala n'obi uche, Echere m na-edebe ndị ahịa elu bụ oké ụzọ na-backlinkers si… ndị na-adị ndụ na ọnụ ala ịnye ọnụahịa na ịtụkwasị tọn njikọ na ala àgwà na saịtị. Dịka onye nkwusa, eziokwu m nwere ike ịchịkwa ọdịnaya ahụ ma nwee ike ịkwado ya dị mkpa.
Ana m atụ anya ịnwale ọrụ maka ndị ahịa m yana ịhụ otu ọ si arụ ọrụ maka azụmaahịa ndị nwere olile anya iji akwụkwọ m bipụta ndị na-ege ntị ọhụụ nwere nnukwu ọdịnaya.
Debanye maka Akaụntụ Nweta Na-efu
Tags: akwụ ụgwọ postA
Okporo mmiri gị Video Editor maka otu n'ime ndị a na Audio Synching